၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ခြင်းထက်ဆိုးရွားသော အရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ခြင်းထက်ဆိုးရွားသော အရာ
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ခြင်းထက်ဆိုးရွားသော အရာ
Posted by ဆိုးဆိုး on Sep 2, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 8 comments
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မည်ဆိုသော ခန့်မှန်းချက်များက အခုတလော မြန်မာပြည်မှာ လူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျား ရေပန်းစားနေတဲ့ သတင်းထူးလေးပါ…
စာရေးသူက အဲဒီထက်ထူးတဲ့ သတင်းလေးပေးချင်တော့လည်း ဒီပို့စ်ရေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။
ပထမဆုံး သတင်းထူးလေးမပေးခင်မှာ ၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်မည်ဟူသော သတင်းရဲ့ ဂယက်လေးတွေ ကို သတင်းပေး မယ်နော်…
တနေ့တော့ ရန်ကုန်က မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို Online မှာတွေ့ပါတယ်။ မာကြောင်းသာကြောင်းမေးရင်းနဲ့ ပြောလိုက်တာ …
မကြာသေးမီက မှ သူ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြောင်းပြောပါတယ်။ လက်ထပ်ဖြစ်သွားတာလေးကတော့ ဒီလိုပါကွယ်။
me: …ဟုတ်လား နင် သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီလား??
me: ..နင်တို့အိမ်က သဘောတူလိုက်ပြီလား??
ခင်: ဘယ်ကလာ သယ်ရင်း ရယ်… နှစ်ဦးသဘောတူလေ…အခု ငါ့အိမ်က ငါ့ကိုအမွေပြတ်စွန့်လွတ်ထားတယ်။
me: သြော်ဖြစ်ရလေ ခင်လေးရယ်….
ခင်: .. ငါလည်း အိမ်ကသဘောတူထားတဲ့ သူနဲ့တောင်စေ့စပ်ထားပြီးပြီ… လက်ထပ်ဖို့က ရှေ့ လထဲမှာရှိတာ…. ငါလည်း အိမ်က ငါ့ဘဝအတွက်ကောင်းအောင်စီမံတာသိတယ်လေ…. ငါ့ရည်းစားက နင်သိတဲ့အတိုင်း အရမ်းဆိုးလွန်းတယ်…. တသက်လုံးအတွက် ဘယ်လိုမှ လက်တွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘုးဆိုတာသိပြီးသား…အခုတောင် ယူကာစရှိသေး …အသောက်အစား က မလျှော့… သူလည်း မသောက်ရတော့မှာ စိုးလို့နဲ့တူပါတယ်လေ..
me: အင်း (ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် ဘယ်လိုပြောနေပါလိမ့် ဟုတွေးကာ အင်းနေလိုက်ပါသည်။)
ခင်: ဒါပေမယ့် ငါရောသူရောချစ်တယ်လေ…. ပြီးတော့ သူဆိုးတာခံရလည်း အလွန်ဆုံး ၃ နှစ်လောက်ပေါ့…
me: ဟေ…ဘာလို့တုန်း … (မတွေးကောင်းတွေးကောင်း ဟိုတွေးဒီတွေးရင်း သူငယ်ချင်းမလေးအတွက် စိတ်ပူသွားပါတယ်။)
ခင်: နင်ကလည်း မသိဘူးလား …. ၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်လေ…. ဒီတော့ တသက်လုံးသူဆိုးတာ မခံနိုင်ပေမယ့် ၃နှစ်လောက်တော့ ခံနိုင်ပါတယ်လေ…..
me: ဟေ…. အဲဒါက တကယ်ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ…
ခင်: အိုး လူတိုင်းသိတယ်… နင်အင်တာနက်မှာ ကြည့်ပါလား …သိပံ ပညာရှင်တွေ ပြောတာလေ….နင်မသိလို့ …အုံ့ပုန်းမ နှင်းနှင်းသိလား…
me: အင်း … သူဘာလုပ်နေလဲ…
ခင်: နင်သိရင် အံ့သြသွားမယ်…သူအုံ့ပုန်းကြိုက်နေတဲ့ ကိုမိုးမင်းကို ရည်းစားစကားပြောပစ်လိုက်တာ ….မသေခင်လေး ၂၀၁၂ မတိုင်ခင် သူချစ်တာလေးတော့ ကြိုသိစေချင်လို့တဲ့….
Me: ဟေ…. ဟုတ်လား… သူကအရမ်းကိုရှက်တတ်တာတောင်….
ခင်: ဒီထက်တောင်များသေးတယ်.. ခုတော့ အချိန်မရတော့ဘူး …. ငါ့ ယောကျာ်း အလုပ်ကပြန်လာပြီ ….. နောက်မှတွေ့မယ်နော် ..သယ်ရင်းကြီး…
me : အေးအေး…. အစစအရာအရာ အဆင်ပြေ….. (အွန်… စကားလေးတောင် မဆုံးသေးဘူး … sign out သွားပြီ..)
ပြီးခဲ့တဲ့လက Sydeny ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ညကြီးအချိန်မတော် ၁၂.၃၀ မှာဖုန်းလှမ်းဆက်ပါတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့
မြတ်: ဟဲလို … သူငယ်ချင်း … (ရွှတ်…အဟင့်.. ဟင့်..)
မြတ်: ငါ မြတ်… (ရွှတ်..)
me:ဟေးး… မြတ်… ပြော….ငါအိပ်နေပြီဟ… ဒါနဲ့ …နေပါဦး… နင်ငိုနေတာလား????
မြတ်: အင်းဟုတ်တယ်… ဆောရီးနော် ..အရမ်းနောက်ကျနေပြီ..ငါခေါ်တာ…
me: ရပါတယ်… ငါမနက်ဖြန် day off.. ပြန်အိပ်လို့ရတယ်.. ပြော ဘာဖြစ်တာလဲ..
မြတ်: ငါ့ညီမလေး ဆုံးသွားလို့…
me: ဘာ ဘာဖြစ်တယ်…
me: ဘုရား..ဘုရား … မွန်မွန်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးတာလဲ (အိပ်ချင်စိတ်တွေကျက်ပျောက် ငှက်ပျောက်ဖြစ်သွားတော့သည်။ မွန်မွန်ဆိုတာ ၁၉နှစ်ကျော်ကျော်လောက်သာရှိသေးသော ကလေးမလေ။ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးမှာ ပြုံးလိုက်တိုင်း ပါးချိုင့် ရှည်ရှည်လေးတွေနှင့် ချစ်ဖို့ကောင်းသော ကောင်မလေး ….. မကြာခင်လည်း သူ့အစ်မရှိရာ သို့ ပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့ စီစဉ်ထားသူလေးပါ… ဒီလောက်ငယ်ရွယ်တက်ကြွကာ ဖူးပွင့်နေသော ပန်းလေးတစ်ပွင့် အကြွေစောလိုက်တာ ဟုနှမျောမိသည်။ သူငယ်ချင်းက ဘာမှမပြော ငိုပဲ ငိုနေတော့သည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ မငိုဖြစ်အောင်ထိန်းထားရသည်။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ချော့မော့ဖြောင့်ဖြရင်း သူရင်ဖွင့် သွားတာ က တကယ့်ကိုသနားစရာပါ…။
မွန်မွန်က ၂၀၁၀ ကုန်ရင် နိုင်ငံခြားသွားမှာပါ။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားမသွားခင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ရင်း …. ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး ချစ်သူဖြစ်သွားပါတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေး က မကြာခင်ခွဲရမယ်ဆိုတာသိတော့ … အမြဲတတွဲတွဲ ….အချစ်ကြီးချစ်ကြပါတယ်။
ကောင်လေးက အခုတခါသွားပြီးရင် ဘယ်တော့တွေ့နိုင်မှာလဲ … မင်းနဲ့ကိုယ်တော့ မနီးနိုင်တော့ဘူး.. ၂၀၁၂ ကျရင်လည်း ကမ္ဘာပျက် …. ကိုယ်ကမ္ဘာလည်း ပျက် ဆိုပြီး ကလေးအတွေးနဲ့ ပြောပါများရင်း
ကောင်မလေးလည်း အချစ်ကျူးကာ နယ်ကျွံသွားပါတယ်…… နောက်တော့ ကောင်မလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပါတယ်။ ကောင်လေးက တာဝန်ယူမယ်ပြောပေမယ့် ကောင်မလေး ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားကို သူထွက်ချင်ကြောင်း…. သူမ မိဘတွေသာ အခုလို သူမဒီလိုဖြစ်နေမှန်းသိရင် သေလိမ့်မယ်ပြော ပြီး ..ဘယ်သူမှ မသိစေပဲ သူတို့ဘာသာ တိတ်တိတ်လေး ..ကလေးဖျက်ချပါတော့တယ်။ အဲဒါလုပ်ပြီးတော့ ကောင်မလေး အသည်းအသန်ဖျားပြီး ဆေးရုံရောက်တော့မှ မိဘတွေက အကုန်သိရတာပါ…
၂၀၁၂ ကမ္ဘာမပျက်ခင် ဘာလုပ်ချင်လဲ ချစ်လေး ???
၂၀၁၂ မရောက်ခင် မသေခင်လေး လုပ်ချင်တာလေးလုပ်ထားဦးမှ
၂၀၁၂ ရောက်ရင်အကုန်သေကြမှာပဲ ….. ကြိုးစားနေလို့လဲမထူးဘူး ….
သို့လော သို့လော မေးခွန်းများ.. အတွေးများဖြင့် ……….
ဒီ ၂၀၁၂ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်.. နိုင်ငံခြားအရပ်ရပ်ရောက်နေသော အသိမိတ်ဆွေများကို သူတို့ရောက်နေသော နေရာမှ လူများ ဒီအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်… ဘာတွေများ ဖြစ်ပျက်နေလဲမေးကြည့်တော့ ..
သတင်းတွေထဲက သတင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲတဲ့။ အဲဒါကို လူတိုင်းလိုလို သတင်းအဖြစ်ကြားထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အရာရာက ပုံမှန်ပါပဲ။ လက်ရှိအချိန်ကို စားဝတ်နေရေ အတွက် ဘဝအတွက် ကြိုးစားပြီး ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။
လက်ရှိစက္ကန့်တွေတိုင်းဆိုတာ မသိနိုင်တဲ့အနာဂတ်ထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အပျင်းကြီးပြီး ၂၀၁၂ ကိစ္စ ရမယ်ရှာမယ်ကာ လက်ကြောမတင်းပဲ ဘဝကို ပြီးပြီးရော နေရင် ….
၂၀၁၂ ကုန်လို့ ကမ္ဘာက ဒီအတိုင်းပဲဆို …. ကိုယ့် ဘဝပဲပျက်မှာပါ။
လက်ရှိအချိန်တွေက ကိုယ့်အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။
အကုန်သေမယ့်အတူတူ …. ငရဲအတူတူကျကြမှာပဲလို့ ကောင်းမှု မမြတ်နိုးပဲ
မိုက်မဲဖို့ အဖော်ညှိတဲ့သူက များပါတယ်။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာမပျက်ခင် ကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်နေတဲ့ လူတွေ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင် ကမ္ဘာပျက်တာထက်ဆိုးတဲ့ ဆင်းရဲခြင်း အမျိုးမျိုးကို ခံစားရင်း ဘဝပျက်ဖို့ မြင်ယောင်မိကြောင်း စေတနာရှေ့ထားလို့ သတင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ
မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်း မြို့စားလေး မေးလ်မှတဆင့်တွေ့ပြီး ကောင်းသောပို့လေးဖြစ်သောကြောင့် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ကောင်းပါတယ်.အစ်ကို။ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာနဲ့ အဲ့လိုသာလုပ်ရရင် ဒုက္ခပါပဲ။
အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ တွေးပြီးကြောက်နေရတဲ့လူက 2ခါသေရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။
ကမ္ဘာတော့မပျက်သေးဘူး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလိုက်လို့ လူပါ ပျက်သွားရရှာတယ် သနားစရာ ..
၂၀၁၂မှာ ကမ္ဘာပျက်မပျက်တော့ မသိဘူး။
အဲလိုတွေလုပ်ကြမှ ခုတည်းက အကုန်ပျက်ကုန်တော့မှာပဲ။
အရက်သောက်ဖို့ ၁၂ ရာသီအကြောင်းပြချက်အမြဲ၇ှိနေတယ်လေ။
ဘာပဲပြောပြော ကမ္ဘာပျက်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး မပျက်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး ….. ၂၀၁၂ နဲ့လုပ်စားနေတာ ……